Mampianara anay hivavaka – FJKM Ambavahadimitafo Mampianara anay hivavaka |
Hoy ny Apostoly Paoly ao amin’ny I Tes 5 :17 : « Mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra«
Fifandraisana manokana amin’Andriamanitra ny vavaka; izay midika ho fahasoavana ho an’izay manatanteraka izany. Efa nambara tany amin’ny fanazavana tany aloha fa tsy ny maha maro na ny maha tsara rindra azy akory, no mampisy lanja ny vavaka, fa ny finoana ao anaty amin’ny fanatanterahana azy.
Ny vavaka ary noho izany dia fanefena sy fitaizana ny finoana, mba hifankazatra amin’Andriamanitra, ka hahatakatra ny sitrapony (sitrapon’Andnamanitra izany) ary hiezaka hanao izany mandritra ny andro iainana.
Koa tsy noho ny fahaporetana akory. no tokony hanosika hivavaka, toy ny hanala fanadinana na tojo aretina mafy na mifanohitra amim-pahavalo, na dia mety tsy hanosi-bohotanana anao tokoa aza Andriamanitra, fa amin’ny fiainana tsotra andavanandro dia tokonv hivavaka sy hifankazatra amin’ Andriamanitra ianao.
Fa inona no zava-miafin’ny vavaka? Hatramin’izay nilentehan’izao tontolo izao tao amin’ny fahotana, dia ny lalànan’ny natiora, araka ny fahatakaran’ny olombelona azy, no manodina ny zavatra rehetra teraka, miaina, marary, antitra, maty. sns…
Nv vavaka kosa dia afaka mihoatra izay lalàn’nv natiora izay. Ahoana angaha izany?
– Misy ny efa maty, fa rehefa natao ny vavaka, dia mbola afaka nitsangana indray (Oh.Jao. 11 : 41-44 ).
– Nisy ny tsy fahampian-kanina, fa rehefa natao ny vavaka dia nahavoky dimy arivo lahy ny mofo dimy sy hazandrano roa ( Jao.6 : 9-11).
Izany fihoarana ny lalan’ny natiora izany dia ifaninanan’ny anjelin’Andriamanitra sy ny anjelin’ny devoly, toy izay hita amin’ny fanaovana majia. Izany hoe hatreto na ny vavaka ataon’ny mpino an’Andriamanitra na ny mpankato fanahy hafa, dia toa samy mahazo valiny avokoa.
Fa ankoatra izany, noho ny fahotana dia rakotry ny zavom-panahy ratsy manodidina ny olona sy ny voary rehetra, ka tafasaraka amin’IIay Tompon’ny fiainana izy.
Zava-panahy ihany no hahazoana mandresy ny zava-panahy : ny vavaka no fitaovana nomen’ Andriamanitra ny mpino mba tsy hahadifotra azy ao amin’ny fangejan’ ireo fanahy ratsy manodidina azy ireo.
Koa isaky ny manonona vavaka ny mpino, dia misava ny zavona. mandositra ny devoly. Ny vavaka no teny tsy azon’ny devoly samborina, na ahodina ka ampiasaina ho amin-javatra hafa
Ankoatra izany, ny teny rehetra aloaky ny vavan’ny olona dia azon’ny devoly ampiasaina avokoa. Ahoana angaha izany?
Raha misy resaka iray, na ampahibemaso na ankatakonana, ataonao amin’olona iray na maro, dia samborin’ny devoly iny. Mampiasa olona izy hahatonga ilay teny ho poizina, ka manova tanteraka izay voalaza, mampiapitapita azy mandra-pifototr’izany ho fahavoazana ho anao na ho an’ny hafa.
Arv faly ny devoly rehefa misy olona voa mafy toy izany ; tanteraka ny asany. Izany fiasan’ny devoly izany dia efa hita hatrany am-piandohana, ka nanovany izay nambaran’Andriamanitra tamin’i Adama.
Firifiry akory ny olona rafitr’ady noho izany fanolanan’ny devoly ny teny izany!!! Misy mihitsy aza karazam-panahy mpitsikilo (isan’izany ny kalanoro), izay mpitati-teny any amin’ny manam-pahefana na ny olona manana fifandraisana amin’izy ireny.
Koa raha misy zavatra tsy tiana ho fantatr’iza na iza, dia ny tsy miloa-bava no fanafodiny. Ny vavaka kosa, izay voaharon’ Andriamanitra sy ny finoana, dia tsy hain’ny fanahy na inona na inona samborina.
Koa tsy fandemen-tsaina akory ny vavaka, na fanamparana hakamoana tsy hiasa, fa fitaovana mahomby napetrak’ Andriamanitra hahalavorary ny fiainan’ny mpino.
Vokatr’izany fiainam-bavaka izany dia tsy olona mpanara-drian-drano ny mpivavaka, na olona manao zavatra noho ny fihatsarambelatsihy, na noho ny filan-dera sy voninahitra amin’ny hafa, na noho ny filan-javatra mahaporitra, fa olona matoky ny Tompony, mametraka ny fiainany manontolo hatramin’izay madinika indrindra eo amin’ Andriamanitra, mahay mihaino an’ Andriamanitra, mahay mangina sy miteny araka ny fotoany avy, ary mazàna manokatra ny vavany hidera Ilay Tompony amin’ireo hiram-panahy.
Koa tsarovy fa raha mivavaka ianao, dia eo anilanao Andriamanitra, mihaino ny bitsiky ny fonao mangina. Amena.